Google Activity, na ny fahafantaranao ny zava-drehetra momba ny zavatra ataonao mifandraika amin'ny Google sy ireo tolotra isan-karazany.
Ny Activity Google na MyActivity dia ny mamantatra ny asanao amin'ny Google sy ny tolotra Google rehetra mifandraika amin'ny Google Map, YouTube, Google Calendar ary ireo fampiharana am-polony hafa mifandraika amin'ity goavan'ny Internet ity.
Ny tombontsoa lehibe amin'ny Tetikasa Google dia manana tantara amin'ny antsipirihany momba ny fikarohanao rehetra sy ny hetsika amin'ny aterineto amin'ny servisy Google, fomba tsara ahitanao ny fikarohana, ohatra, na ny fijerena lahatsary YouTube nijeranao teo aloha.
Google ihany koa dia manasongadina ny lafiny fiarovana amin'io safidy io. Satria ny Save Google dia mamonjy ny hetsika rehetra ao amin'ny kaontinao, dia azonao haingana raha misy olona mampiasa ny kaonty Google na ny solosainao tsy misy fahalalana.
Eny tokoa, na dia mandritra ny hack na ny fangalarana ny maha-izy anao aza ianao dia ho afaka hanaporofo ny fampiasana hosoka ny kaontinao amin'ny alàlan'ny Google Action. Mahasoa raha manana toerana manan-danja ianao izay mety hilefitra raha ampiasain'ny olona fahatelo; indrindra eo amin'ny sehatra matihanina.
Ahoana no ahazoako ny activité Google?
Raha tsy fantatrao dia azo inoana fa efa manana ny Hetsika Google ianao! Raha ny marina, ny fampiharana dia manomboka mivantana raha manana kaonty Google ianao (izay mety ho noforoninao ohatra amin'ny fanokafana adiresy Gmail na kaonty YouTube).
Mba hahatongavana any, mandehana fotsiny amin'ny Google, safidio ny rindranasa "Ny fihetsiko" amin'ny alàlan'ny fanindriana ny takelaka eo ankavanan'ny efijery. Azonao atao koa ny mandeha any amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity: https://myactivity.google.com/myactivity
HAMAKY Miasà lavitra miaraka amin'ny TeamViewer mandritra ny fitokonana
Afaka mahazo fampahalalana isan-karazany ianao, tantara amin'ny antsipiriany momba ny zavatra ataonao, antontan'isa momba ny fampielezana ny programa samihafa amin'ny hetsika mafy orina sy maro hafa. Ny fahafahana miditra dia haingana sady mahasoa, tsy manana fialan-tsiny ianao mba handeha any ary hanamarina ny asanao tsy tapaka.
Ahoana no fomba hitantanana ny tantaram-piainako?
Koa satria ny Google Activity dia mifandray mivantana amin'ny kaonty Google-nao fa tsy amin'ny ordinatera na smartphone, dia tsy ho afaka hamafa fotsiny ny tantaram-pijerena ny ordinateranao ianao na hiditra amin'ny sehatra tsy miankina hamerenana ny kaonty manaraka ny kaontinao.
Raha toa ka mihoatra ny iray amin'ny fampiasana ny kaonty Google ianao, dia azonao atao ny mitazona ny zaridainao ho an'ny antony manokana, ka ho tianao ny hamerana na hanaisotra ity fampiharana ity izay manara-maso ny asanao. Raha ny marina, ity asa ity dia mety mahafaly mora, saingy misy vahaolana.
Aza mikoropaka, manolotra anao fotsiny i Google hankanesanao any amin'ny Dashboard an'ilay application mba hamafana fampahalalana sasantsasany amin'ny tsindry vitsivitsy na hanafoanana fotsiny ny fanarahan-dia amin'ny alàlan'ny fanindriana ny "fanaraha-maso ny hetsika" avy eo amin'ny tsy manamarina na inona na inona tianao hotanana "miafina" rehefa ao amin'ny Internet ianao.
Noho izany, raha toa ianao ka manolo-tena tanteraka amin'ity endri-javatra ity na tsikinao izany ary mampidi-doza raha te hanana an'io karazana fitaovana mavitrika io dia mandehana haingana any amin'ny Google Action ary ampifanaraho amin'ny fanirianao ny fanaraha-maso ny kaontinao!
HAMAKY Ahoana ny fomba hamoronana hitsin-dàlana amin'ny fitendry Windows 10?
Google Activity, na ny fahafantaranao ny zava-drehetra momba ny zavatra ataonao mifandraika amin'ny Google sy ireo tolotra isan-karazany. 24 Febroary 2022Tranquillus
Teo alohaManadio ny mombamomba anao ao amin'ny Facebook, fantaro ny maha-zava-dehibe ny tambajotra sosialy amin'ny sarinao.
manarakaFantaro ny AccountKiller, ny torolàlana ho an'ny mpampiasa manerantany izay manampy anao hisafidy ireo kaonty miverimberina.
Tutorial momba ny sarimiaina mihetsika PowerPoint
Miasà lavitra miaraka amin'ny TeamViewer mandritra ny fitokonana
Ny lisitry ny Shortcuts amin'ny Keyboard amin'ny Windows 10
Microsoft PowerPoint: mahatakatra ny mahasoa sy ny fampiasana azy.